ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲ ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ
(ခ) လူမပါစင်းလုံးငှား (Bareboat Charter) စနစ်ဖြင့် ပြေးဆွဲနေ​သော ရေယာဉ်များအား ယာယီမှတ်ပုံတင် (Provisional Certificate of Registry) ထုတ်ပေးခြင်း။
(ဂ) VGM ကြေငြာရန်လိုအပ်သော Shipper Registration Number ထုတ်ပေးခြင်း။
(ဃ) မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း။
(က) ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်မှ ရေယာဉ်အမည်သတ်မှတ်ပေးပါရန် ရေ ကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲသို့ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်း များနှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည်။
( ခ) ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ ရေယာဉ်အား (ကနဦး) စစ်ဆေးပြီးသောအခါ ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်မှ ရေယာဉ် မှတ်ပုံ တင်နံပါတ် သတ်မှတ်ပေးပါရန် ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲသို့ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ နှင့်အတူလျှောက်ထားရမည်။
ကုန်သေတ္တာများ၏ (ကုန်ပစ္စည်းအပါအဝင်) စုစုပေါင်းအလေးချိန် (VGM) လျှောက်သူသည် နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက (Passport) မိတ္တူနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြောင်း (Stay Permit) တို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားအား ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်မည်ဆိုပါက Special Power of Attorneyနှင့်အတူ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်စာ ပါရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
လျှောက်ထားသူသည် သက်ဆိုင်ရာရေယာဉ်၏ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းလက်မှတ် (သို့) Myanmar Registry ရှိမှသာ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(Bareboat Charter)စနစ်ဖြင့် ပြေးဆွဲနေသော ရေယာဉ်များ၏ ယာယီမှတ်ပုံတင်ကြေးအား နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းရမည်။
သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေး ပေးဆောင်ရမည်။
(ခ )ပိုင်ရှင်(သန်းခေါင်စာရင်း+ မှတ်ပုံတင်)
(ဂ )ရေယာဉ်အမည်ပေးအကြောင်းကြားစာ (ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲ)
(ဃ)အတည်ပြုပြီးရေယာဉ်ပုံစံ (ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီ ယာဌာနခွဲ)
(င )ရေယာဉ်တည်ဆောက်ခွင့်ပြုမိန့် (ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ)
(စ ) ရေယာဉ်အား (ကနဦး) စစ်ဆေးပြီးကြောင်း ထောက်ခံခြင်း(ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ)
Bareboat Charter လုပ်ကိုင်ခွင့် (အပျော်စီးရွက်သင်္ဘောအပါအဝင်) လျှောက်ထားရာတွင်-
(က) ကုမ္ပဏီမှ (Bareboat Charter) စနစ်ဖြင့် ငှားရမ်း ပြေးဆွဲခွင့်ပြုပါရန်လျှောက်လွှာ
(ခ) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ ( FormVI , XXVI အပါအဝင်)
(ဂ) BARE CON ‘‘A” ပုံစံ (Owner နှင့် Charterer လက်မှတ်ရေးထိုးထား သောပုံစံ)
(ဃ) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Power of Attorney)
(င) အလံလွှင့်ထူခွင့်ဆိုင်းငံ့လက်မှတ် (Suspension Certificate, Flag state)
(စ) သင်္ဘောမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (Ship Registry)
(ဆ) သင်္ဘောပေါ်တွင်ခန့်အပ်မည့် အနည်းဆုံးဝန်ထမ်း အရေအတွက်(Minimum safe manning)
(ဇ) သင်္ဘောသက်သေခံလက်မှတ် ( Class certificate)
(စျ) ရေယာဉ်၏ဓါတ်ပုံ (ရှေ့/နောက်/ဝဲ/ယာ) ( Ship’s Photo from different views)
(ည) သင်္ဘောအတိုင်းအထွာအချက်အလက်များ (Ship’s Particulars)
(ဋ) သင်္ဘောသားစာရင်း (Crews’ List)
(ဌ) အရာရှိများ၏လက်မှတ်များ(Officer’s Certificates)
(ခ) ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွားခရီးသည်တင်ရေယာဉ်များ အတွက်လျှောက်ထားရာတွင် အထက်ဖော်ပြပါ အချက်(၁၂)ချက် အပြင်အောက်ပါအချက်များအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-
(ခ) Safety Equipment
(ဂ) Load Line
(ဃ) Safety Radio (Radio Station Licence)
(စ) Passenger Ship Safety Certificate
(ဆ) ပြည်တွင်းတွင်တည်ဆောက်ပါက တည်ဆောက်ခွင့်ပြုမိန့်အား တင်ပြရန်
(ဂ) နိုင်ငံခြားသွားကုန်တင်ရေယာဉ်များ အတွက်လျှောက်ထားရာတွင် အထက်ဖော်ပြပါ အချက်(၁၂)ချက် အပြင် အောက်ပါအချက်များအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-
(ဃ)Safety Radio (Radio Station Licence)
(စ) I. O. P. P
(ဆ) I. A . P. P
(ဇ ) I . S . P. P
(ခ) ကုန်သေတ္တာများ၏ (ကုန်ပစ္စည်းအပါအဝင်) စုစုပေါင်းအလေးချိန်(VGM) လျှောက်ထားရာတွင်
(က) ကုမ္ပဏီအမည်အပြည့်အစုံနှင့် ရုံးချုပ်လိပ်စာ
(ခ) တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်များ၏အမည် (Operation Director/Logistics Personnel etc.)
(ဂ) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ( Form VI, XXVI )
(ဃ) တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ မှတ်ပုံတင်ကဒ်မိတ္တူ
(င) ကုန်သေတ္တာ၏ VGM အလေးချိန်ကိုချိန်တွယ်သည့် ကိရိယာ၏ Calibration and Verification Certificate မိတ္တူတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
နည်းလမ်း(၂)အသုံးပြုသူများသည် အထက်ပါအချက် (၅)ချက်နှင့်အတူ အောက်ပါအတိုင်းကို ပူးတွဲတင်ပြပေး ရမည်ဖြစ်သည်-
(က) အသုံးပြုသော ချိန်တွယ်နည်းလမ်း
(ခ) မည်သည့်ချိန်တွယ်ကိရိယာအားအသုံးပြုကြောင်း (Scales, weighbridge etc.)
(ဂ) ချိန်တွယ်ကိရိယာအားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်
(ဃ) ကွဲလွဲမှုရှိခဲ့ပါကရှင်းလင်းတင်ပြသော လုပ်ငန်းစဉ်
(စ) ကိရိယာ၏အမှားအယွင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ကြန့်ကြာမှုများအား တင်ပြသော မှတ်တမ်း
(ဆ) VGM ချိန်တွယ်ရာတွင် အသုံးပြုသောပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ
(ဇ) ချိန်တွယ်ကိရိယာကို အသုံးပြုမည့် သူများအား လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးမှုအစီအစဉ်
(စျ) Quality Management System နှင့်အညီ စစ်ဆေးထားသော Certificates မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) အလားတူ Certificates မိတ္တူ
(က) သက်ဆိုင်ရာရေယာဉ်၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်းလက် မှတ်(သို့) Myanmar Registry၊ Load Line နှင့် L.S.A
( ခ ) ပိုင်ရှင်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
( ဂ ) မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသွား သင်္ဘောပိုင်ရှင်များအသင်း (သို့မဟုတ်) ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွား ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်အသင်း ထောက်ခံစာ
(က) အမှုတွဲအား ပြင်ဆင်ပြီး ဝင်စာမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းရေးသွင်းရမည်။
( ခ ) ပိုင်ရှင်မှ လျှောက်ထားလာသည့် ရေယာဉ်အမည် (၅)မျိုးအား အမည်တူ ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး၍ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံလျှင် ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ပြုပြီးပါက ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်ထံသို့ ရေယာဉ်အမည်သတ်မှတ်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာပေးပို့ရန် နှင့် ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ ဌာနခွဲနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများသို့ အဆိုပါ အကြောင်း ကြားစာမိတ္တူကို ပေးပို့ရမည်။
( ဂ ) ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲမှ ရေယာဉ်အား (ကနဦး) စစ်ဆေးပြီးသောအခါ ရေယာဉ် ပိုင်ရှင်မှ ရေယာဉ်မှတ်ပုံ တင်နံပါတ် သတ်မှတ်ပေးပါရန် ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲသို့ အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ နှင့်အတူလျှောက် ထားရမည်-
(ခ) ပိုင်ရှင်(သန်းခေါင်စာရင်း+ မှတ်ပုံတင်)
(ဂ ) ရေယာဉ်အမည်ပေးအကြောင်းကြားစာ(ရေကြောင်း လုပ်ငန်း ဌာနခွဲ)
(ဃ) အမှုတွဲအား ပြင်ဆင်ပြီး ဝင်စာမှတ်တမ်း စာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းရေးသွင်းရမည်။
( င ) ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ စစ်ဆေး၍ လက်မှတ်ရေးထိုး ခွင့်ပြုပြီးပါက ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်ထံသို့ ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် သတ်မှတ်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာပေးပို့ရန်နှင့် ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများသို့ အဆိုပါ အကြောင်းကြားစာမိတ္တူကို ပေးပို့ရမည်။
Bareboat Charter စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်လျှောက်ထားပုံ
(က) လူမပါစင်းလုံးငှား (Bareboat Charter)စနစ်ဖြင့် ဆောင် ရွက်ရန် ယာယီမှတ်ပုံတင်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း/ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း။
(က) လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများဖြင့် လျှောက်ထားလာမှု အပေါ်ညွှန်ကြားရေးမှူး(ရေကြောင်းလုပ်ငန်း)မှတဆင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ထံသို့တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်တောင်း ခံရမည်။
(ခ) လျှောက်ထားလာသောသင်္ဘော၏ မှတ်ပုံတင်နှင့် လက်မှတ်များသည် သက်တမ်းရှိပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးပါက ကျသင့်အခငွေ (Registration Fees for Bareboat Charter) အားတွက်ချက်၍ Payment Order ပေးပို့ရမည် ဖြစ်သည်။
(ဂ) ကျသင့်အခငွေ (Registration Fees for Bareboat Charter) အား DMA ငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းပြီးပါက Provisional Certificate of Myanmar Registry အား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန် တင်ပြရ မည်။
(ဃ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပါက စာရင်းရေးသွင်းမှတ်တမ်းတင်ပြီး ပိုင်ရှင်ထံသို့ထုတ်ပေးရမည်။
(ခ) ပယ်ဖျက်ခြင်း/ အပြီးဝယ်ယူခြင်း/လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) အမည် ပြောင်း လျှောက်ထားခြင်း
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများဖြင့် တင်ပြလျှောက် ထားလာမှုအပေါ် တာဝန်ရှိအမှုထမ်း၊ အရာထမ်းများ မှအဆင့်ဆင့် စိစစ်ကြီးကြပ်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူး (ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲ)မှတဆင့် ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်ထံသို့တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံ၍ ခွင့်ပြု မိန့်ရရှိပြီးပါက သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
SOLAS, VGM ( Shipper Registration Number ) ရရှိရန် လျှောက်ထားပုံ
(က) လျှောက်ထားသူများသည် ပြည့့််စုံစွာဖြည့်စွက်ထားသော မှတ်ပုံ တင်လျှောက်လွှာပုံစံ (Shipper Registration Form) နှင့် အတူ မိမိတို့အသုံးပြုမည့် ချိန်တွယ်ခြင်းနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်၍ လျှောက်ထားရပါမည်။
(ခ) အထက်ပါ လျှောက်လွှာတင်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အား ပြည့်စုံစွာဆောင်ရွက်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက Approval Letter for Shipper Registration Number အား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
(ဂ) Shipper များအနေဖြင့် Shipper’s Verified Gross Mass (VGM) Declaration Document ပုံစံအား Shipment တင်ပို့သည့်အခါတိုင်း သေချာတိကျစွာ ဖြည့်စွက်၍ ၂၄နာရီအတွင်း ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြား မှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲ Emailလိပ်စာ (dma. maritimecommercial@ gmail.com) သို့ လိပ်မူ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(က) မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းသွားရေယာဉ်များနှင့် စက်မဲ့တွဲများ၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်အသစ်၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုး၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ပျောက်ဆုံး၊ ယာယီ'စ'လိုင်စင်၊ အခြားပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် လျှောက်ထားခြင်း၊
(ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူး (သို့) ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ်ထံမှ ခွင့်ပြုမိန့်ကျလျှင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ(၅)သို့ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေး ပေးသွင်းခြင်း၊
( ဂ ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ယူခြင်း
အမှတ် ၃၆၃/၄၂၁၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့်သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားနိုင်သည့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးရုံးခွဲများ
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့။
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့။
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့။
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး (မြိတ်မြို့/ ထားဝယ်မြို့/ ကော့သောင်းမြို့)